Mercedes-Benz B170 2009 (#696477) ကို Dagon Myothit(South... | CarsDB
Mercedes-Benz B170 2009
9885 total views, 29 today
Lot Number: #696477
Mercedes ရဲ့ ရှားပါတဲ့ Hatchback ဖြစ်တဲ့ B 170 ကားလေး ရောင်းဖို့ရှိပါတယ် , လူငယ်ဆန်ဆန် ညာမောင်းကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ပါဝင်တဲ့ feature များအနေဖြင့်
17" LIGHT ALLOY WHEEL 10-SPOKE DESIGN ALL-ROUND
LUGGAGE NETS ON DRIVER RESTS L AND R
INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - JAPANESE KATAKANA
8-SPEED AUTOMATIC DUAL-CLUTCH GEARBOX
STEPPE BROWN - METALLIC FINISH
COMAND DVD (WITHOUT NAVIGATION)
BI-XENON HEADLICHT W.ACTVIE CURVELIGHT LEFT-DRIVE
RADIO RC W. REDUCED RANGE W/O PANIC (315 MHZ)
PROVISION FOR INSTALLATION OF TELEVISION
MODEL SERIES 245
SOFTWARE CONTROL FOR STATIC CURVE ILLUMINATION
DISPLACEMENT 1.7 LITER
R4-GASOLINE ENGINE M266
HEADPHONES F. REAR SEAT ENTERT. SYST. (AMOUNT 1)
SPEED- + LOADINDEX 87V
FRONT AXLE HALF, RIGHT တို႔ပါဝင္ၿပီး ေပးရတဲ့ ေစ်းႏွင့္တန္တဲ့ ကားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ၊ ကားၾကည့္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းညွိနွိုင္းမလား ေခ်းေငြျဖင့္ အရစ္က်ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အေသးစိတ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါၿပီ။
Mercedes ရဲ့ ရှားပါတဲ့ Hatchback ဖွဈတဲ့ B 170 ကားလေး ရောငျးဖို့ရှိပါတယျ , လူငယျဆနျဆနျ ညာမောငျးကားလေးပဲဖွဈပါတယျ ပါဝငျတဲ့ feature မြားအနဖွေင့ျ
FRONT AXLE HALF, RIGHT တို့ပါဝင်ပြီး ပေးရတဲ့ ဈေးနှင့်တန်တဲ့ ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ၊ ကားကြည့်ပြီး ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းမလား ချေးငွေဖြင့် အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ရန် အသေးစိတ်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Than Swe Pyae မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Mercedes-Benz B170 2009 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့်အချိန်4နာရီခန့်